Elon Musk ayaa ku khalkhal galiyay fariin uu dhawaan ka masaxay fanaan | Abuurista khadka tooska ah
Eeloon Miski waa mid ka mid ah dadka qarnigan, laakiin mararka qaarkood wuxuu leeyahay xoogaa nacasnimo ah oo aynaan fahmin. Gaar ahaan markii uusan rabin inuu ku amaano shaqo uu akoonkiisa kula wadaagay fanaanka sameeyey.
Mid ka mid ah kuwii wanaagsanaa ayaa la isla geeyay, ka dib markii uu faallo ka bixiyay in bilyaneerka tiknoolajiyadda ahi uu ku adkaysanayo in ammaanta farshaxan-yaashu ay burburinayso aaladda. Kii qaatay niyad jab weyn ayaa ah Meli Gamali, inkasta oo uu runta sheego haddana waxaa la geliyay kicinta kumanaan qof oo jecel
Aqoonsiga shaqada farshaxanku waa mid aad muhiim u ahKaliya maaha sababta oo ah way fududahay in la xuso ama xitaa lagu xiro websaydhkaaga, laakiin maxaa yeelay waa ficil wax ku ool u leh bulshada hal-abuurka ah guud ahaan.
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan ahay fanaan yar oo dunidan weyn,
Laakiin hadaad safri lahayd, i soo raac ???https://t.co/uP2xEGSpJ1#art #dilista #xirfadle #dhoodaan #xikmad-yaqano # ka noqoshada #somalia #muuqaalada #StarWars #NieRAautomata #Qalbiyada Boqortooyada #travel #xarrin pic.twitter.com/arJmCjm3oX
- Meli Melo ?? (@Abdihakin_) June 16, 2019
Miski uma muuqdo inuu ku raacsan yahay maximkan wax walbana waa bilaabeen markii Elon uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray farshaxanka Magali Juun 15. Wax walba way fududaan lahayeen hadii ninkaan xiriiri lahaa ama xitaa xuso fanaanka. Ma aysan sameyn.
Farshaxanka ayaa isla markiiba la wadaagay falcelintaada ku saabsan tweet-ka oo sheegaya taxaddar la'aanta by Musk; fariin qoraal ah oo heshay in ka badan 13.000 oo jecel oo heshay in ka badan 3.500 oo qof si ay uga hadlaan wixii dhacay.
Qoraal uu tirtiray Elon wuxuu xusay inuu jeclaan lahaa inuu isaga joojiyo amaah siinta fanaaniinta barta Twitter marka "doqon" uu si dhakhso leh u ogaan karo cidda shaqada qabatay. Caqli ahaan markii koonto sidaada oo kale ay raacaan malaayiin isticmaaleyaal ah, qaar badan ayaa heli lahaa, laakiin had iyo jeer maahan in shaqadaada uu tweet gareeyo qof leh taageerayaal aad u tiro badan.
Sikastaba fanaankan wuxuu ku guuleystey inuu farshaxankiisa geliyo kicinta Oo hadda in mid ka mid ah tweets-kaagu gaaro kumanaan iyo kumanaan jecel, hawlgal suuq-geyn bilaash ah oo dhinac kasta ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Elon Musk wuxuu leeyahay siinta sumcadda fanaaniinta barta Twitter-ka ayaa baabi'ineysa aaladda